China Double-Sided-PCB warshad iyo saarayaasha |Kaz
Isticmaalka dhumucda saxda ah ee walxaha waa muhiimsi loo dhiso FR4 PCBS.Dhumucda waxa lagu qiyaasaainji, sida kumanaan, inji, ama millimitir.Waxaa jira dhowr waxyaalood oo la tixgeliyo markaad dooranaysowalxo FR4 ah oo loogu talagalay PCB-gaaga.Talooyinka soo socda ayaa doonafududayso habka doorashadaada:
1. Dooro walxaha khafiifka ah ee FR4 si aad u dhisto baalaladaha leh caqabadaha booska.Qalabka khafiifka ah ayaa taageeri kara qaybaha kala duwan ee casriga ah ee loo baahan yahay si loo dhiso qalabka, sida qalabka Bluetooth, isku xirka USB, iwm. Waxay sidoo kale ku habboon yihiin mashruucyo waaweyn oo ay injineeradu rabaan inay diiradda saaraan naqshadaha kaydinta booska.
2. Qalab khafiif ah oo FR4 ah ayaa ku habboon codsiyada u baahan dabacsanaan.Tusaale ahaan, isticmaalka walxaha khafiifka ah ee baabuurta iyo PCB-ga caafimaadka ayaa ku habboon sababtoo ah PCB-yadan
u baahan in si joogto ah loo foorarsado.
Iska ilaali inaad u doorato alaabta khafiifka ah ee naqshadaynta PCB-ga jeexan, sababtoo ah tani waxay kordhinaysaa halista dhaawaca ama dillaaca sabuuradda wareegga.
3. Dhumucdiisuna waxay saameyn kartaa miisaanka guddiga wareegga daabacan waxayna sidoo kale saameyn kartaa iswaafajinta qaybaha.Tani waxay ka dhigan tahay in walxaha khafiifka ah ee FR4 ay si macquul ah u fududeynayaan soo saarista looxyada wareegga khafiifka ah, taas oo u horseedaysa qalabka elektiroonigga ah ee fudud.Alaabtan khafiifka ah ayaa ah kuwo soo jiidasho leh oo sahlan in la qaado.
Marka laga fogaado isticmaalka alaabta FR4, walxaha FR4 maaha doorashada saxda ah haddii codsigaagu u baahan yahay mid ka mid ah kuwan soo socda: Iska caabbinta kulaylka wanaagsan: FR4 laguma talinayo haddii PCB loo isticmaalo jawi heerkul sare ah.Tusaale ahaan, walxaha FR4 maaha doorashada saxda ah ee PCB ee codsiyada hawada hawada.
Alxan la'aanta rasaasta: Haddii macmiilkaagu u baahan yahay PCB oo waafaqsan RoHS, alxanka bilaa rasaasta ah waa in la isticmaalaa.Inta lagu jiro alxanka-la'aanta rasaasta, heerkulka reflux wuxuu gaari karaa meesha ugu sarreysa 250 ° C, sababtoo ah iska caabbinta heerkulka hooseeya awgeed, walxaha FR4
uma adkaysan karo.
Calaamadaha soo noqnoqda ee sarreeya: Marka lagu soo bandhigo calaamadda soo noqnoqda sare, saxanka FR4 ma ilaalin karo xannibaad deggan.Natiijo ahaan, isbedbeddelku wuu dhacaa waxaana laga yaabaa inay saameeyaan daacadnimada calaamadda.
Sababtoo ah caannimadooda iyo isticmaalkooda ballaaran, maanta way fududahay in la helo qalabka FR4 PCB ee suuqa oo leh tilmaamo iyo hawlo kala duwan.Doorashada hodanka ah ee noocan oo kale ah ayaa mararka qaarkood ka dhigaya doorashooyin adag.Xaaladdan oo kale, waa muhiim inaad kala hadasho shuruudahaaga soo saaraha.
Hore: Liiska Qiimaha Flex-Pcb-(Fpc) - Qalabka Gaarka ah-PCB - Kaz